Waa Kuma Kabtanka Ugu Wanaagsan Taariikhda Horyaalka Premier League? Joe Cole Oo Halyeeyo Badan Oo Lagu Muransanaa Kala Doortay - Gool24.Net
Waa Kuma Kabtanka Ugu Wanaagsan Taariikhda Horyaalka Premier League? Joe Cole Oo Halyeeyo Badan Oo Lagu Muransanaa Kala Doortay
22/05/2020 Apdihakem Omer Adem
Ciyaaryahankii hore ee kooxaha Liverpool iyo Chelsea ee Joe Cole ayaa soo xushay kabtanka ugu wanaagsan taariikhda horyaalka Premier League xilli kooxaha horyaalkaas gaar ahaan kuwa waaweyn ay soo mareen kabtano hoggaamin dabiici ah lehi.
Tusaale ahaan Steven Gerrard, John Terry, Roy Keane, Nemanja Vidic, Vincent Kompany, Patrick Vieira iyo kuwo kale oo badan ayaa kooxo ay halyeeyo khaas ah ka yihiin kusoo samaystay taariikh weyn iyaga oo hoggaan u ah.
Haddaba, Joe Cole oo isagu aragtidiisa shaqsiga ah dhiibanaya ayaa xushay kabtankii Chelsea ee John Terry inuu yahay kabtanka iyo hoggaamiyaha ugu wanaagsanaa taariikhda horyaalka ugu sarreeya England.
Terry ayaa 19 sano oo koobab ah kusoo qaatay Chelsea waana kabtanka ugu guulaha badan abid kooxdaas isaga oo kusoo guuleystay dhammaan koobabka heer kooxeed ee muhiimka ah kahor intii uusan Aston Villa ku biirin sanadkii 2017.
Cole ayaa Terry lasoo ciyaaray mudo toddoba sano ah oo ah intii u dhaxaysay 2003 ilaa 2007 waxaana uu xiddigan ay hore koox wadaaga usoo noqdeen ku amaanay awoodiisa hoggaamineed.
Kabtanada uu Cole kaga soo garab ciyaaray Premier League ayaa ah kuwo badan balse waxa ugu muhiimsanaa Terry oo uu wakhtiga ugu badan la qaatay iyo Steven Gerrard oo uu markii dambe Liverpool kula biiray.
Cole oo u warramayay BT Sport ayaa yidhi “Isagu waa kabtan dhammaystiran, dareenkiisa uu faah-faahin ku bixiyo garoonka dhexdiisa iyo dibediisuba, Isagu waxa uu ahaa kabtan dhammaystiran oo koox lagu helo”
“Waxaan odhan lahaa isagu waa kabtankii ugu wanaagsanaa taariikhda Premier League, waxaan filayaa inay jirto dood lagu doodayo kuwo kale laakiin JT hubaal waa mid halkaas jooga”